स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेललाई स्वाईनफ्लु – USNEPALNEWS.COM
by यूस नेपाल न्युज August 30, 2017
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई स्वाईनफ्लु भएको छ । उनलाई इन्फ्लुएन्जा ए पोजेटिभ भाइरस (एच१ एन१) पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए । पोखरेल एक हप्तादेखि वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
गिरीका अनुसार दुई दिन अघि स्वाईनफ्लु आशंकामा खकार परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो । उनलाई फिजिसियन डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले हेरिरहेको छ ।
‘बाँच्ने रहर थियो, तर इज्जतै नरहेपछि बाँच्ने रहर मर्दो रहेछ’ चुनावमा हारेपछि यस्तो लेख्दै आत्महत्या !